May 2016 | Pyithu Hluttaw - ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြည်မိုးနိုင် Ayeyar Hinthar Holdings Co.,Ltd မှ ဦးရဲမင်းအောင်နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြည်မိုးနိုင် သည် Ayeyar Hinthar Holdings Co.,Ltd မှ ဦးရဲမင်းအောင်နှင့် အဖွဲ့အား ယနေ့ မွန်းလွဲ (၂) နာရီ အချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်ရေးရာဆောင်၊ အဆောင်အမှတ်(I-8) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် အမေရိကန်ကွန်ဂရက်၊ အောက်လွှတ်တော် House Democracy Partnership ဥက္ကဋ္ဌ H.E Mr.Peter Roskamဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်သည် အမေရိကန်ကွန်ဂရက်၊ အောက်လွှတ်တော်၊ House Democracy Partnership ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr.Peter Roskam ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား ယနေ့မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော် အဆောက်အအုံ ဇမ္ဗူသီရိ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရအချင်းချင်း၊ လွှတ်တော်အချင်းချင်း ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်သိန်း(CSIS)ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊အရှေ့တောင်အာရှ လေ့လာရေးဌာန ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ မာရေးဟီဘတ် ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်သိန်းသည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ၀ါရှင်တန်အခြေစိုက် မဟာဗျူဟာနှင့်နိုင်ငံတကာလေ့လာရေး အဖွဲ့(CSIS)မှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အရှေ့တောင်အာရှ လေ့လာရေးဌာန ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ မာရေးဟီဘတ် ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အားယနေ့မွန်းလွဲ(၁၃း၄၅)နာရီတွင်လွှတ်တော်ရေး ရာဆောင်အမှတ် (I-5) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ လွှတ်တော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ ဖျက်သိမ်းခြင်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံးမှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မေလ ၂၇ ရက်နေ့ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၇/၂၀၁၆) ဖြင့် လွှတ်တော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ ကို ဖျက်သိမ်းကြောင်း ကြေငြာလိုက်သည်။ အဆိုပါအဖွဲ့ကို ၁၀-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄၂/၂၀၁၆) ဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် လွှတ်တော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ ကို ၂-၅-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌဦးဇော်သိန်း ပြည်ထောင် စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အီတလီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr.Pier Giorgio Aliberti အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်သိန်းသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အီတလီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr.Pier Giorgio Aliberti အား ယနေ့ နေ့လယ် (၁၄း၃၀)နာရီ အချိန်တွင် လွှတ်တော်ရေးရာဆောင် အဆောင်အမှတ် (I-5)၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အေး Asian Devlopment Bank (ADB) မှ Country Director, Mr.Winfried Wicklein ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အေးသည် Asian Devlopment Bank (ADB) မှ Country Director Mr. Winfried Wickiein ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့အား ယနေ့ နေ့လယ် ၂ နာရီခွဲအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော် အဆောက်အအုံ ရေးရာဆောင်အမှတ် (I-7) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးခင်မောင်စိုး၊ ကော်မတီအဖွဲ့ ဝင်များဖြစ်ကြသော ဦးကျော်မင်းလှိုင်နှင့် ဦးစိုးမြင့်တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြည်မိုးနိုင် Thinkhaypa Energy Service မှ ဦးကျော်ဝင်းဆွေနှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြည်မိုးနိုင်သည် Thinkhaypa Energy Service မှ ဦးကျော်ဝင်းဆွေနှင့် အဖွဲ့အား ယနေ့ နေ့လယ် (၂) နာရီခွဲ အချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်ရေးရာဆောင်၊ အဆောင်အမှတ် (I-8) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် ပြည်သူများ စွမ်းအင်အလုံအလောက် သုံးစွဲနိုင်ရေး၊ နိုင်ငံအတွင်းအသုံးပြု လျက်ရှိသော စွမ်းအင်ပမာဏပိုမိုရရှိရေးနှင့် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာများကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးဇော်သိန်း သည်ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr.Roland Kobia အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌဦးဇော်သိန်း သည်ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr.Roland Kobia အား ယနေ့ ညနေ ၄ နာရီအချိန်တွင် လွှတ်တော်ရေးရာဆောင် အဆောင်အမှတ် (I-5) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံများက မြန်မာနိုင်ငံကို အကူအညီပေးနေသောကိစ္စများ၊ အထူးသဖြင့် လွှတ်တော်ကြီးနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးကို ဥရောပသမဂ္ဂအနေဖြင့် ဆက်လက်ကူညီရေးကိစ္စရပ်များ၊ ဥရောပနိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သက်သော ကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်သိန်းနှင့် ပညာရေးမြှင့်တင်မှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာတင်အောင် ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့အခြေစိုက်၊ မြန်မာ-အမေရိကန် လူမျိုးကွန်ယက်အသင်း (Network of Myanmar American Association-NetMAA) အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်သိန်း၊ ပညာရေးမြှင့်တင်မှု ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာတင်အောင် နှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာအောင်ခင် တို့သည် အမေရိကန်နိုင်ငံ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့အခြေစိုက်၊ မြန်မာ-အမေရိကန် လူမျိုးကွန်ယက်အသင်း (Network of Myanmar American Association-NetMAA) မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မင်းနိုင် နှင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးသခင်ခိုင်ဘွား ခေါင်းဆောင်သော အဖွဲ့အား ၂၀၁၆ ခုနှစ် မေလ ၂၄ ရက်နေ့ ညနေ (၁၅း၃၀) နာရီအချိန်တွင် လွှတ်တော်ရေးရာဆောင်အမှတ် (I-5) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် ဂျပန်နိုင်ငံ အောက်လွှတ်တော်အမတ်၊ ဂျပန်နိုင်ငံ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး ဝန်ကြီးဟောင်း H.E.Mr.Takumi NEMOTO လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်သည် ဂျပန်နိုင်ငံ အောက်လွှတ်တော်အမတ်၊ ဂျပန်နိုင်ငံ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး ဝန်ကြီးဟောင်း H.E.Mr. Takumi NEMOTO အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတူ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိ သူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။